အင်အားအကြီးဆုံးဆာမူရိုင်းက ဘယ်သူလဲ ? - JAPO Japanese News
အင်အားအကြီးဆုံးဆာမူရိုင်းက ဘယ်သူလဲ ?
လာ 15 Jul 2019, 15:55 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ ရှေးခေတ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဆိုရင် ဆာမူရိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းတွေရဲ့ခေတ်ဟာ တော်တော်လေးကိုရှည်လျားခဲ့ပြီး ခေတ်တွေတိုင်းမှာ တော်တော်လေးကို အင်အားကြီးတယ်လို့ ပြောကြတဲ့ လူတွေတစ်ယောက်စီပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆာမူရိုင်းခေတ်အဆုံးမှာ နောက်ဆုံးဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဆာမူရိုင်းအဖွဲ့တွေရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အုပ်ချုပ်နေခဲ့တဲ့ အဲဒိုခေတ်ရဲ့အစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး ဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာ ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုသောင်းကျန်းသူတွေကို အားကာင်းကောင်းနဲ့ နှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့လိုပုံစံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်ကတော့ ဒီလိုပုံစံပါ။ 近藤勇（こんどう　いさみ）ခွန်ဒိုး အိဆမိ ရဲမူရင်းပုံအစစ်ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာကလည်း …… ကြောက်စရာကြီး ….
ဆာမူရိုင်းခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ငြိမ်းချမ်းခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံက ခန်းဂျူ့စု လို့ခေါ်တဲ့ ဓားသိုင်းကို မေ့နေကြတဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေများနေတဲ့အချိန်မှာ ခန်းဂျူ့စု ကို သေသေချာချာလေ့လာသင်ယူပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့အရည်အချင်းတွေရှိပါတယ်။
ကဲ… အဲ့ဒီထဲမှာမှ ဘယ်သူက အင်အားအကောင်းဆုံးလဲ ?
အကောင်းဆုံးလို့ပြောရရင် ၃ ယောက်ရှိပါတယ်။
・沖田総司（おきた　そうし）　ရဲ့မူရင်းပုံအစစ်
ခန်းဂျူ့စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေက ကောင်းတယ်လို့ပြောကြပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုက အသက် ၂၇ နှစ်မှာ အဆုတ်တီဗီရောဂါနဲ့ သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
斎藤一（さいとう　はじめ）　ဆိုင်းတိုး ဟဂျိမဲ ရဲ့မူရင်းပုံ
ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဓားရေးလမ်းကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
永倉新八（ながくら　しんぱち）နာဂခုရ ရှင်ပချိ
အားကြီးတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာ ဆိုင်းတိုးနဲ့အတူတူ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်းတိုးနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့ အသက်ကြီးနေပေမယ့်လည်း ဓားကိုဘယ်တော့မှ မစွန့်ပစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အင်အားအကြီးဆုံးဆာမူရိုင်းအနေနဲ့ Shinpachi Nagakura ဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ရှင်းပချိ ကို ၁၈၃၉ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိတိုကျိုမြို့လို့ခေါ်တဲ့ အဲဒိုမြို့မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၇ နှစ်မှာ ကန်ဒိုလမ်းကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီကျောင်းမှာ ရှင်တိုမုနန်းလျူး လို့ခေါ်တဲ့ ခန်ဒို ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်တဲ့ဓားရေးသမားဘဝနဲ့ သေသေချာချာလေ့လာခဲ့ပြီး ခန်ဒိုဒေသမှာ ရှိတဲ့ အမျိုးမျိုးသော ဓားသမားတွေရဲ့လေ့ကျင့်ကွင်းတွေမှာ တိုက်ခိုက်ဖို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သွားရောက်ခဲ့တဲ့ လေ့ကျင့်ကွင်းတွေမှာလည်း အင်အားအကြီးဆုံးအနေနဲ့ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး ခန်ဒိုဒေသမှာ ပြိုင်စံရှားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာ ရှင်းဆန်းဂူမိ ကိုတည်ထောင်သူ အိဆမိခွန်ဒို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ရှိအဲအိကန် လို့ခေါ်တဲ့ လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှာ ပါဝင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းကလေ့ကျင့်ကွင်းတွေက အင်အားအကြီးဆုံး ဓားသမားတွေ ဝန်းရံထားလို့ လူကြိုက်ပိုများလာပြီး ကျောင်းသားဦးရေပိုမိုများခဲ့တယ်ဆိုတာဟာ အင်အားကြီးတဲ့ရှင်းပချိ ရှိနေတာဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခန်းဂျူ့စုတွေက ရှင်းပချိ ကိုနှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရှင်းဆန်းဂူမိအနေနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ရှေ့တန်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံက အင်အားအကြီးဆုံးဆာမူရိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အထက်က ပြောသမျှကို လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါတယ်။
အင်အားကြီးတဲ့စစ်ပွဲတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ ငြိမ်ချမ်းတဲ့ခေတ်ကို ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။
အသက်ကြီးလာတဲ့ရှင်းဘခုရဲ့ ပျော်စရာကတော့ မြေးကိုခေါ်ပြီး ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့အဝင်ဝမှာ ယာခူဇာတွေက စောင့်ပြီးဖမ်းနေကြပါတယ်။
ပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်ထင်ရလောက်တဲ့ အားနည်းတဲ့အဖိုးကြီးကို တွေ့လိုက်လို့ဖြစ်မယ်နော်။
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ ရှင်းပချိကို ယာခူဇာတွေက ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
လွတ်လပ်တဲ့ခေတ်တုန်းမှာရှိတဲ့ ယာခူဇာတွေနဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာသေမလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှင်းပချိဟာ နှိုင်းယှဥ်စရာမရှိလောက်အောင် မှားယွင်းခဲ့ကြတယ်ထင်တယ်နော်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဓားသမာလမ်းကိုင်လိုက်ခဲ့ပြီး ခန်းဂျူ့စုဓားရေးသင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ ရှင်းဘခုဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းဆန်းဂူမိရဲ့ အင်အားအကြီးဆုံးဆာမူရိုင်းက ဒီ ရှင်းပချိ နဂခုရ ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်ဓါးကိုရှောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား ? !!!!
Porsche ရဲ့ကိုယ်စားပြုဒီဇိုင်းနာက ဂျပန်လူမျိုးလား?
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကတည်းက သန့်ရှင်းခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ
Evangelion ကိုအခမဲ့ ကြည့်လို့ရပါပြီ!!
အသက်၆၀အရွယ် Street dancer!
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးရုပ်ပွားတော် Ushiku Daibutsu အား ရေသက်ပါယ်ရန်စိန်ခေါ်မှု
ကမ္ဘာပေါ်က ဟီရိုးတွေကို ဆာမူရိုင်းအသွင်ပြောင်းလိုက်ရင် ！
ကလေးကိုဆက်ပြီးကျွေးမွေးနေရှာတဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်တစ္ဆေတစ်ဦးရဲ့ မိခင်မေတ္တာ !!
Toilet ထဲမှာ ယောက်ျားလေးသီးသန့်သာဆော့နိုင်တဲ့ဂိမ်းကို တီထွင်မိသောအခါ ?